Soomaaliya Oo Aan Lagu Soo Darin Liiska Qiimeynta Aduunka Ee WEF – Goobjoog News
Hey’adda World Economic Forum todobaakan waxaa ay soo saartay warbixin dheer oo lagu qiimeynayo 137 dal oo caalamka ah.
Waxyaabaha dalalkaasi lagu qiimeeyay waxaa ka mid ah: Kaabayaasha dhaqaale, waxbarashada sare iyo midda hoose, caafimaadka, hal-abuurka, tayada xagga suuqa, waxaa kale oo la qiimeeyay awoodda hey’adah dowliga ah iyo arrimo kale.
Dhanka dhaqaalaha Dalalka Afrika waxaa loo kala qeybiyay Waqooyiga Afrika iyo dalalka ka hooseeya Saxaraha, nasiib-darro qiimeyntan sida aad arki-doontaan kuma jirto Soomaaliya.
Dhanka Waxbrashada: Waxaa ka soo qaadan karnaa 1. Switzerland, 2. Singapore, 3. Finland, 4. US, 9. Germany, 16. Australia, 22. UK, 25. Israel, 29. China, 36. Japan, 40. France, 41. Saudi, 64. Russia, 101. Turkey, 117. Nigeria, 125. Brazil, 130. Egypt,
Finland, 2. Switzerland, 3. Belgium, 20. Germany, 24. UK, 25. US, 40. India, 47. China, 105. Turkey, 127. Brazil
Finland, 2. NZ, 3. Norway, 9. UK, 15. Japan, 29. US, 54. India, 56. China, 95. Russia
Xagga technology, 2017.
Finland, 2. Norway, 3. Switzerland, 6. US, 9. UK, 11. Japan, 16. Germany, 19. France, 40. Saudi, 47. Italy, 57. Turkey, 72. India, 81. China, 84. Russia, 105. Iran, 132. Venezuela
Warbixin lagu eegayo tartanka kala duwan ee caalamka ka socdo, waxaa magaalada Davos ee Switzerland ka soo saaray World Economic Forum, waxaa uu so joogta ah u soo baxaa illaa 1971-dii.
Warbixintan ay kooxdan soo saarto waxaa ay dalalka uga faa’ideystaan wax ka qabashada faqriga iyo sidii looga faa’ideysan lahaa kaabayaasha dhaqaale iyo wax soo saarka qofka.
Faah Faahin: Madaafiic Lagu Weeraray Garoonka Diyaaradaha Ee Baydhabo